Vangölü Express bụ otu n'ime ụgbọ okporo ígwè TCDD Transportation, bụ nke na-aga n'etiti Ankara na Tatvan, na-agafe ugwu ugwu ma na-agabiga ihe ndị dị mma. Nhọrọ nke mbụ maka ndị chọrọ ịga Van na njem obi ụtọ ma chọọ ịtọ njem ha [More ...]
Ationgbọ njem ọha na Elazig
Transportationgbọ njem ọha nke Elazig ga-enye ndị mmadụ ọrụ n'efu n'ụbọchị ezumike ụbọchị anọ. Na nkwupụta nke ọchịchị nke Elazig kwuru, ụgbọala ndị njem nke obodo Elazig n'oge Eid al-Adha iji nyere aka na mmemme dị mma na nke udo nke ụmụ amaala. [More ...]
Ọrụ ndị ọzọ na-arụ maka okporo ụzọ Malatya na-aga n'ihu
Malatya Metropolitan Mayor Selahattin Gürkan, Cevatpaşa Agbata obi (nọ n'azụ MACRO Market) mgbe ịchụpụ ego na ọrụ okporo ụzọ gara n'ihu nyocha nke mbibi ahụ. Selahattin Gürkan, Onye Isi Obodo nke Obodo ukwu, yana Onye Isi Ọchịchị Secretary General [More ...]
13 na Mus. narị afọ, nke Seljuks Murat Bridge wuru na mpaghara gbara ya gburugburu, njem na-achọ inweta. Dịka nkwupụta bipụtara na webụsaịtị gọọmentị nke Governorate nke Mus; Bulunan dị n'akụkụ Osimiri Murat na 13. narị afọ nke Seljuks wuru [More ...]
Malatya Çetinkaya Line Highway overpass ga-emecha na Disemba
TCDD 5, onye mere ngosiputa banyere owuwu nke uzo di elu na Malatya - Çetinkaya Line. Onye njikwa mpaghara Mustafa Çalık, 9 nde 506 puku 221 puku 2019 TL na-akwụ ụgwọ nke oru ngo XNUMX na Disemba [More ...]
Narlı Malatya Line Level Crossings Mma
XCDX TCDD. Ọrụ ndozi ahụ malitere na 5 na ngaghari larịị n'ime ókè nke Director of Operations arụchaala. Onye isi oche mpaghara Narlı-Malatya akara Km: 2018 + 2018-5 + 71 larịị etiti n'etiti ọrụ mmezi nkeji 425 arụchara. [More ...]
Şehit Fethi Sekin City Hospital Njikọ Njikọ Okirikiri
Elazığ Ndi Isi Obodo nke Sayensi Science site na ndi otu ejikọtara na ụzọ njikọ Şehit Fethi Sekin City Hospital na-arụ ọrụ mkpuchi oghere. Otu egwuregwu jikọtara na Directorate of Science Affairs, Şehit Fethi Sekin City Hospital na -agagide iku ịgba ụgwọ malitere ijikọ okporo ụzọ. [More ...]
Mgbatị UMKE nke Mba na-aga n'ihu na Malatya
Malatya Governor Aydin Barus, Ministry of Health, General Directorate of Emergency Medical Services, Òtù nke Islam Cooperation (OIC) otu ihe karịrị iri abụọ na-anọchite anya nke mba ọzọ na World Health Organization anāchi achi 81 na agadi mkpara si Europe na Turkey ụlọ ọrụ [More ...]
Transportgbọ njem na Elazig Sehit Fethi Sekin City Hospital
Şahin Şerifoğulları, Mayor nke Elazığ, na-aga n'ihu na-eme atụmatụ njem njem ekwuputala tupu ntuli aka. Şerifoğulları, onye mere ihe ngosipụta ahụ ọ kọwara n’isi nke Integrated Public Transportation Network Rehabilitation [More ...]
The mbụ mbupụ ụgbọ oloko ga-ejikwara n'etiti Turkey na Georgia, TCDD General Director Ali Ihsan kwesịrị ekwesị na Georgian Railways General Manager David Peradze òkè na 23 July 2019 Tuesday, e zitere n'ime Erzurum na Palandöken Logistic Merkezi'ndegerçekleştiril ememe. AKITKỌ: “Mbupụ [More ...]
The mbụ ụgbọ okporo ígwè na-anakwa mbupụ ụzọ gasị n'etiti Turkey na Georgia, ga-agwa ijeoma ememe ga-ẹkenịmde ke Erzurum Palandöken lọjistik Center. Iron Silk Road, mara dị ka Baku-Tbilisi-Kars (BTK) ụgbọ okporo ígwè akara na ntinye n'ime ọrụ nke ibu iga n'etiti mba na mpaghara na Turkey [More ...]
23 N'ihi na mba Malatya Culture na Art na Ememe Apricot, ndị ọrụ ụgbọ ala na-adịghị na Mixmişpark Fair malitere ịhazi ya site na Malatya Metropolitan Municipality. Selahattin Gürkan, Mayor nke Malatya Metropolitan Municipality kwuru na [More ...]
Malatya North Ring Road Ụgbọ njem ga-ala
Mehmet Cahit Turhan, Minister of Transport and Infrastructure, gara Malatya Northern Ring Road na saịtị site n'inyocha mgbalị ndị dị mkpa iji mezue oru ahụ, o kwuru. Malatya bụ otu n'ime obodo ndị dị mkpa nke zụrụ ọtụtụ ndị ọchịchị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'oge gara aga ruo ugbu a. [More ...]
Minista Turhan: 'Anyị na-emepe ihe ngo maka njem na njem ụgbọ okporo ígwè site na nnukwu ụgbọ okporo ígwè'
Minista Turhan, biara na nleta dị iche iche na Malatya, na-aga n'ihu na-ewu mgbidi North Ring Road. N'ikpeazụ, Turhan gara Malatya Metropolitan Municipality ma nata ozi banyere ọrụ ya site n'aka Mayor Selahattin Gürkan. Turhan, n'okwu ya ebe a, [More ...]
Turkey Ga-lọjistik Center nke oge a Silk Road
Turkey Ga-lọjistik Center of Modern Silk Road: Turkey, kpuchie ụgbọ okporo ígwè oru ngo ndinyanade mbịne si China na England, na-ehiwe lọjistik hiwere 21. Obodo itoolu a ga - emezigharị ga - abụ isi ihe dịịrị nde dollar 2 kwa ụbọchị iji nwetaghachi ihe dị iche iche n'etiti Asia na Europe [More ...]
Ụgbọ ala ụgbọ elu nke abụọ malite n'etiti Erzincan Divrigi
10, nkeji ụgbọ ala nke abụọ n'etiti Erzincan Divrigi, ga-amalite na Wednesday. The Republic of Turkey State Railways (TCDD) Provincial Director Kenan Aydin, raybüs abụọ oge na Erzincan Divrigi ga-amalite dị ka nke ụbọchị Wednesday, July 10 kwuru. Ọrụ ụgbọ; [More ...]
Atụmatụ Bus na Mişmişpark Fair Area
23. N'ihi ọrụ Malatya Culture na Art na Ememme Apricot, Malatya Metropolitan Municipality amalitela ịhazi ọrụ ụgbọ ala na Mişmişpark Fairgrounds. 7 Site na Sunday ruo na 14.00 Julaị ruo 24.00 awa, oge ọ bụla na Grand Bazaar [More ...]
A gaghị enwe ụzọ gbawara agbawa ma ọ dịghị pavụ na Erzincan
Erzincan Obodo obodo dum agbawara ụzọ, pavement iji nọgide na-arụ ọrụ n'amaghị ama ịhapụ n'okporo ámá. Erzincan Municipality Directorate nke Science Affairs Ndị ọrụ nchịkọta na-arụ ọrụ nchịkọta na mpaghara dị iche iche mgbe ha rụgharịrị okporo ụzọ ndị mebiri emebi. Ogige ofufe [More ...]
ELBUS, nke a na-arụ ọrụ afọ gara aga na Elazığ, na-elekọta ya
Elazig Municipality kwuru na eji ya eme njem n'obodo ukwu nke ụgbọ ala eletrik na-adabaghị na nkà na ụzụ, n'ihi ya, a kọrọ na ụgbọala ahụ ga-elekọta ya. Na nkwupụta nke Elazığ Municipality, okwu ndị a gụnyere: ọrụ hizmet n'ime Elazığ Municipality Transportation Inc. [More ...]